सक्कली डिएसपीको कार्ड बोकेर हिँड्ने नक्कली डिएसपी, काठमाडौंमै लाखौं ठगेको खुलासा, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
सक्कली डिएसपीको कार्ड बोकेर हिँड्ने नक्कली डिएसपी, काठमाडौंमै लाखौं ठगेको खुलासा
निर्मला घिमिरे , २७ पौष २०७५
काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत डिएसपी हुँ भन्दै होटल व्यवसायीहरुलाई ठगी गर्ने भक्तपुर बालकोट निवासी अनिल थापालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । सक्कली प्रहरी डिएसपी भीम किरण बोगटीको भिजिटिङ कार्ड देखाएर म भीम किरण बोगटी हुँ भन्दै ठगी गरेको खुलेपछि थापालाई प्रहरी परिसर काठमाडौंले बिहीबार राति ११ बजे पक्राउ गरेको हो ।
सुरुमा अनिल थापा भक्तपुर तिर जग्गा दलालीको काम गर्थे । १४/१५ दिनदेखि उनी ठमेलका होटल तिर र दरबार मार्गका ठूला ठूला व्यबसायीहरुलाई म डिएसपी भीम किरण बोगटी हुँ अपराध अनुसन्धान शाखामा काम गर्छु भन्दै ठगी गर्न थाले । ३५ वर्षका अनिल थापा लामो समय देखि नक्कली डिएसपी बनेर लामो समयदेखि ठगी गर्दै आएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
नक्कली डिएसपी बनेर ठगी गर्ने थापाले धेरै दुख दिएपछि प्रहरीलाई होटल व्यबसायीले बिहीबार जानकारी गराएका थिए । सोही सूचनाका आधारमा उनलाई प्रहरीले कमलादी स्थित तिरुपति होटलबाट पक्राउ गरेको थियो । तिरुपति होटलको कोठा नं २०३ मा उनी टेबलमा डिएसपी भिम किरण बोगटीको भिजिटिङ कार्ड देखाएर राखेर बसिरहेको अबस्थामा पक्राउ परेका थिए ।
उनी आफू बहालवाला डिएसपी भएको र अनुसन्धानका लागि आएको भन्दै खाएको र बसेको पैसा समेत नतिर्ने र होटल व्यबसायीहरुलाई धम्की दिँदै आएका थिए । निज थापाले सक्कली डिएसपीको भिजिटिङ कार्ड बोकेर होटलमा महिला कामदारहरुलाई र अन्य बाहिरबाटै महिलाहरु ल्याएर पनि दुव्र्यबहार गर्दै आएको प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी होविन्द्र बोगटीले जानकारी दिए ।
तिरुपति होटलमा मात्रै नक्कली डिएसपी बनेका थापाले ८० हजार भन्दा बढी रकम बराबर ठगी गरेको खुलेको प्रवक्ता बोगटीले बताए । अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न अनिल थापाले प्रयोग गरेको भिजिटिङ कार्ड भने प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत डिसएपी भीम किरण बोगटीको थियो ।
डिएसपी भिम किरण बोगटीको भिजिटिङ कार्ड कतैबाट पाएर त्यसैको नक्कली प्रतिलिपी निकालेको हुनसक्ने प्रहरीले अनुमान गरेको छ । यसबारे थप अनुसन्धान हुने प्रहरीले जानकारी दिएको छ । निजलाई डिएसपी हुँ भन्दै किर्ते गरेको अभियोगमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्रहरीले जनाएको छ ।
बहालवाल प्रहरी नै भएपनि पदको दुरुपयोग गरि त्यसरी ठग्ने धम्की दिने प्रहरीलाई कारबाही गरिने भन्दै कसैले त्यसरी धम्क्याएर ठगी गर्न खोजेमा प्रहरीमा खबर गर्न प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी होविन्द्र बोगटीले अनुरोध समेत गरेका छन् ।